トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Intsingiselo yemeko HIV kunye nendawo ngasemva ukubhula "kwezidenge", iqabane iimvakalelo?
Xa "sezidenge" isikhundla umva elithetha
zobungcali abaxeli-mathamsanqa kwindlela
bhula nokuvumisa get ziphicothwa 3500 yen ezamahala card, ikhadi 0-th ka "yezidenge", ziye abahambi inja emhlophe shi kuwe. Ekubeni umntu ihamba ezingamashumi amabini anesibini Major Arcana kwekhadi le ikhadi seluzotyiwe, ukuba bathethe ubukho okhethekileyo kakhulu ikhadi. Phantsi umhambi limhlophe ndanxiba upopayi, uye intonga inxibelelanisa i impahla encinane ukuya ngasekunene, isandla sasekhohlo kunye rose emhlophe, kuye azotywe ngayo ukuhamba zibheke phezulu.
indlela yokuhamba le umhambi sele eliweni, ngokungathi emxelela oko, ikhadi ukuba inja ezimhlophe azisukele ngasemva. Kukho uvakalelo lokuba ngcono okanye abambeke ngokwam kungekudala.
Ukhohlisela iimvakalelo umdlali
eli khadi yobume ezintle ithathwa ukuba ibhekisele imele inkangeleko ebonakala eyokungabi ukuba amanyathelo, ngqindilili, xa kwafika ikhadi ngaphandle kwindawo eqhelekileyo, ixesha ngakumbi free ngenxa yokuba sifuna ukunandipha kubonakala ukuba iqabane injongo yokwenene. Kwimeko zombini Ndicinga ukuba abantu, iqela bakho uzakuva coziness kobudlelwane phakathi kwakho, kubonakala ukuba ukucinga ezifana ukutshata okwangoku. Ekubeni
kubonakala ukuba ufuna siwazise kuchitha ixesha wena kunye kunokuba, wena kungcono ukuphepha ukuziphatha, ezifana ukubopha elinye iqela. Ukuba ukuze ibe wadibana nomnye pati iimvakalelo ehlambulukileyo ixesha ndadibana kunawe, ungenza nzulu ngakumbi abantu ababini lobuhlobo. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo, elinye iqela liya kumela ukuba akukho uyazi wena besini esahlukileyo.
ukuze kujonga wena njengoko yabesini ukuya kwelinye iqela, kubalulekile ukuba baqale bazame ngamandla abhenele ebusweni babo. Ngenxa Ziyatha zikholisa umdla nesenzo ngqindilili kunye neengcinga ezintsha, iqabane Let ngenkalipho ihamba to'd bathi kukho ukuba ukhathazekile ngawe. Noko ke, Siyathandini ngenxa yokuba uyithiyile bomda, Musa eyirhawula kwakusasa na.
_x000D Ulahle iingcinga kutsho kuma _ ngoku, kubalulekile ukwenza ukuba ushiye uzive. Ukuba
isidenge yomntu kwezidenge yemeko umva ithathwa ukuba ibhekisele yaphuma kwindawo umva, elinye iqela okuyiyo ukunyameka karhulumente akakho apha. Yonke okanye ndacinga lenkathazo, okanye uye ngumonde ibekwe kwi imeko Iyandikhathaza loo nto ukusika isiqalo esitsha. In umva nkqu nothando, andifuni ukuvela a yokuziphatha entsha, ndicinga ndifuna ukusombulula ityala kakhulu ngakumbi ubudlelwane. Ukuba
ukuba kunokuba ufuna ukusinda ubudlelwane kunye nomnye umntu, kungcono igcinwe umgama encinane kunye welinye icala. Ukuba unexhala lokuba ngokubeka umgama kunye elinye iqela amaxesha ngamaxesha ukwenzela ukunika kwizivuseleli, ngoko nceda ugcine okubambelela umdla welinye iqela. Kwimeko abantu uthando ezingabuyekezekiyo akubonakali ukuba sokuthandana nxamnye nawe. Ekubeni kusenokwenzeka ukuba kukho ngokwahlukeneyo umntwana ozithandayo, oko kuya kuba ngcono ukuba bacinga ukuba akukho ukubetha.